नेपाली ‘जोन्टी’ भीमको त्यो क्याच ! | Hamro Khelkud
धनगढी (हाम्रो खेलकुद) – दक्षिण अफ्रीकाका पूर्व क्रिकेटर जोन्टी रोड्सलाई विश्व क्रिकेटमा फिल्डिङका बादशाहका रुपमा चिनिन्छ । उनी अहिले नेपालमै छन् ।
धनगढीमा जारी रुस्लान धनगढी प्रिमियर लिगको तेस्रो संस्करणका प्रतियोगिताका सदभावाना दुत र सीवाईसी अत्तरियाका मेन्टरका रुपमा उनी नेपालमा छन् । त्यसैले कम्तिमा उनि फागुन ११ गते सम्म नेपालमै रहने छन् । जोन्टी पहिलो पटक नेपाल आएका भने होइनन् । यसअघि गत मंसिरमा स्पोर्ट्स एडले आयोजना गरेको प्रशिक्षण क्याम्पमा युवा खेलाडीहरुलाई प्रशिक्षण दिन दुई हप्ताको लागि नेपाल आएका थिए ।
त्यसबेला यू-१९ उमेर समूहका क्रिकेटर युवा खेलाडी भिम सार्कीले पनि आफ्ना आर्दशवान क्रिकेटरलाई भेट्ने मौका पाए । उत्कृष्ट फिल्डीङ गर्ने भीम नेपाली क्रिकेटमा ‘जोन्टी’ उपनामले चिनिने गर्दछन् । भीमको फिल्डिङले जोन्टीको झ–झल्को दिने गर्दछ । यसैलाई फेरी एकपटक सिद्ध गर्ने क्रममा भीमले डिपिएलअन्तर्गत मंगलबारको खेलमा एक अविश्वसनीय क्याच लिए । उक्त क्याच अहिले सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ । सामाजिक सञ्जालमा उक्त भिडियो भाइरल छ ।
प्रतियोगिताको चौथो खेलमा मंगलबार विराटनरविरुद्ध भीमले असद उल्लाह खानलाई आउट गर्न उत्कृष्ट क्याच लिए । रुपन्देही च्यालेन्जर्सबाट खेलिरहेका भीमले लिएको उक्त क्याचले अहिले नेपाली क्रिकेट मात्र नभएर विश्वभर चर्चा बटुलिरहेको छ । राष्ट्रिय टोलीका कप्तान पारस खड्कादेखि स्वयं जोन्टि रोड्स आफैंले भिमको क्याच सेयर गर्दै बधाई दिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा भीमको वाहवाहि भइरहेको छ ।
Bhim sharki jonty ..wow..!!! https://t.co/uT6nKrSOsa
— Paras Khadka (@paras77) February 12, 2019
Not just the catch: diving forward; full length; at speed; but he also had to contend with landing in the sand 👏#dpl3 #nepalcricket #catcheswinmatches https://t.co/buz6LJiWh2
भीमले यसरी लिए क्याच
टस जितेर पहिला ब्याटिङ थालेको विराटनगरका भारतीय खेलाडी असद उल्लाह खानले आक्रमक रुपमा ब्याटिङ गरिरहेका थिए । यसै क्रममा पाँचौ ओभरमा कप्तान वसन्त रेग्मीले कृष्ण कार्कीलाई बलिङमा ल्याए । खानले पहिलो बल डट खाए । दोस्रो बल कडा छक्का प्रहार गरे । तेस्रो बलमा पुन डट खाए । चौथो बलमा भने ठूलो शट खेल्न खोज्दा डिप स्क्वायर लेगमा भीमले हावामा फुल लेन्थ डाइभ हान्दै उत्कृष्ट अविश्वनिय क्याच लिए ।
उक्त क्याच लिएपछि भीम जुरुक्क उठे र बल आकाशतिर फाल्दै खुसी साट्न आफ्ना खेलाडीतर्फ लागे । हावामा जम्प हानेर क्याच लिएको ठाउँमा बालुवाले भएका कारण भीम आफैं धुलाम्मे भएका थिए । भीमलाई सबै खेलाडीले टाउको मुसार्दै बधाई दिएर खुसि साटेका थिए । भीमको उक्त क्याचपछि खेल हेर्न फाप्ला आएका लगभग सबै दर्शकले तालि बजाएर बधाई दिए । विपक्षी टोलीका कप्तान करण केसीले पनि लामो समयसम्म ताली बजाउँदै क्याचलाई सम्मान दिए ।
उमेर समुह हुँदै घरेलु लिगमा उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्दै केहि दिन अघि यूएईसँगको समान तीन ओडीआई र टि–२० सिरीजमा १६ सदस्य टोलीमा परेपनि डेब्यू गर्न भने पाएनन् । यूएई टुरमा भिमले डेब्यू गर्ने धेरैले अनुमान गरेका थिए । तर त्यसो हुन सकेन । पछिल्लो समय भीमको प्रर्दशनले भने उनले चाँडै नै डेब्यू पाउने सम्भावना छ ।
यूएई जानु अघिनै प्रशिक्षक जगत टमटाले भिमको फिल्डिङको प्रंसशा गर्दै भनेका थिए – भिम सार्की र सन्दीप जोरा नेपाली क्रिकेटमा अहिलेका सर्वाधिक उत्कृष्ट फिल्डर हुन् । यी दुई खेलाडीले केहि नभएपनि २०, २५ रन फिल्डिङ मार्फत रोक्न सक्छन् ।
जोन्टी रोड्सको त्यो रन आउट
विश्व क्रिकेटमा दक्षिण अफ्रिकाका पुर्व क्रिकेटर जोन्डी रोड्सले सन् १९९२ मा अष्ट्रेलियाविरुद्ध वान डे खेलमा डेब्यू गरेका थिए । सन् २००३ को विश्वकपमा केन्यासँगको खेलपछि रोड्स अफ्रिकी टिममा परेनन् । सन् १९९२ को विश्वकपमा पाकिस्तानका इन्जमाम उल हकलाई रन आउट गर्ने क्रममा रोड्सले हावामा उडेर तीनै स्टम्प ढलाईदिएका थिए । जसमध्य एक स्टम्प भाचिँएको थियो । जुन रन आउटले रोड्सलाई नयाँ उचाईमा पुर्यायो । उक्त रनआउटले आधुनिक क्रिकेटमा फिल्डिङको क्रान्ति सुरु गरको पनि धारणा धेरै दिग्गज क्रिकेटरले राखेका छन् ।